About Voucher Purchase in Myanmar | Prometric
About Voucher Purchase in Myanmar
လက်ရှိ COVID-19 (Novel Coronavirus) အကျပ်အတည်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်ဆေးမှုကို ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။
January 29th 9:00 မှစတင်၍ စာမေးပွဲ voucher များအား ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် စတင်ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Test delivery in Myanmar may be suspended due to the current COVID-19 (Novel Coronavirus) crisis.
From January 29th 9:00 onwards, you can start to apply forachance to purchase voucher, based on first come first serve basis.
Regarding the examination application for the "Specified Skilled Worker Test"
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ အလုပ်လုပ်ရန် နေထိုင်ခွင့်ဖြစ်သော “Specified Skilled Worker (i)" လျှောက်ထားရန်အတွက် ဂျပန်ဘာသာစကားစာမေးပွဲ နှင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများအား ဖြေဆိုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဂျပန်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် JFT-Basic နှင့် Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N4 နှင့်အထက် စာမေးပွဲများဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N4 နှင့်အထက် ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးပါက JFT-Basic စာမေးပွဲအား ဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ပါ။
"Specified Skilled Worker visa Japan" အကြောင်းအား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် နှိပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
စာမေးပွဲတစ်ခုချင်းအတွက် အောက်ပါလင့်ခ်များတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Nursing care skills evaluation test and Nursing care Japanese language evaluation test :
Agriculture Skill Assessment Test:
The Food Service Industry Skills Proficiency Test:
Regarding the voucher application
လျှောက်ထားရန်အတွက် Prometric ID လိုအပ်ပါသည်။ Prometric ID မရှိပါက စာမေးပွဲ၏ ဘယ်ဘက်အပေါ် စာမျက်နှာတိုင်းတွင် မိမိတို့၏ Prometric ID အားရယူနိုင်ပါသည်။
*လူတစ်ဦးလျှင် Prometric ID တစ်ခုသာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
စာမေးပွဲတစ်ခုထပ်ပို၍ ဖြေဆိုသည့်တိုင်အောင် Prometric ID တစ်ခုသာ ပြုလုပ်ရပါမည်။
Prometric ID တစ်ခုထပ်ပို၍ ပြုလုပ်ပါက လိမ်လည်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
*Prometric ID ၌စာရင်းပေးသွင်းထားသော စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ၏ အမည်သည် စာမေးပွဲ Voucher နှင့် အခြားသောသက်သေခံကဒ်ပြားများရှိ အမည်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရပါမည်။
Prometric ID ၌စာရင်းပေးသွင်းထားသော စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ၏ အမည်သည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင်ပါရှိသော အမည်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရပါမည်။
*Prometric ID ၌စာရင်းပေးသွင်းထားသော စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာသည် အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှု ရရှိနိုင်မည့် လိပ်စာဖြစ်ရပါမည်။
လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း စတင်လျှင် စာမေးပွဲတစ်ခုချင်းစီ၏ လျှောက်လွာများအား ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါအချက်အလက်များအား ဖြည့်သွင်းပါ။
‌စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ (Prometric ID ပြုလုပ်စဉ် ပေးထားသော အီးမေးလ်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ရမည်)
စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ၏ Prometric ID နံပါတ်
စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ၏ အမည် (Prometric ID ၌စာရင်းပေးထားသော အမည်)
ဖြေဆိုမည့် စာမေးပွဲ (List မှ ရွေးပါရန်)
မိမိ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား အသုံးပြုခွင့် သဘောတူညီချက် (List မှ ရွေးပါရန်)
*လျှောက်လွှာကို လူတစ်ဦးလျှင် တစ်ကြိမ်သာ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ တစ်ကြိမ်ထပ်ပိုလျှောက်ထားလျှင် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။
*လျှောက်လွှာတွင်မှားယွင်းသော Prometric ID ဖြင့်ထည့်သွင်းဖြည့်စွက်ထားပါက လျှောက်လွှာအား လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ စာမေးပွဲအတွက်အေကြောင်းကြားသော email အားရရှိမည်လဲမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် Prometric ID အားပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
*လျှောက်လွှာပုံစံတွင်သင်ထည့်သွင်းခဲ့သောအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်နအမည်သည် Prometric ID တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းနှင့်မကိုက်ညီပါကလျှောက်လွှာသည် မမှန်ကန်ပါ။
မှတ်ပုံတင်ပြီးသော သတင်းအချက်အလက် ဤနေရာ၌ အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။
စာမေးပွဲတစ်ခုချင်း၏ သတ်မှတ်ထားသောလျှောက်ထားနိုင်သူဦးရေ ပြည့်လျှင် လျှောက်လွှာများပိတ်မည်ဖြစ်သည်။
ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် လျှောက်လွှာများတင်သွင်းပြီး (၃)ရက်အတွင်း ငွေသွင်းရမည့်ပုံစံ၊ နေရာနှင့် ရည်ညွှန်းနံပါတ်အား အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
* လျှောက်ထားသူ အရေအတွက်သည် ကန့်သတ်အရေအတွက်ထပ် ‌ကျော်လွန်နေသောကြောင့် လျှောက်လွှာအား တင်သွင်းပြီးသည့်တိုင် စာမေးပွဲ voucher ဝယ်ယူခွင့် မရရှိနိုင်သေးပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်း မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် စာမေးပွဲကြေးကို သတ်မှတ်ထားသောနေရာသို့ယူဆောင်လာပါ။ စာမေးပွဲကြေးမှာ မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့အကြား ဘဏ်၏ငွေလဲနှုန်းပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနေသည်။ သင်ငွေပေးချေသည့်အခါစာမေးပွဲကြေးကိုမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်တွက်ချက်မည်။
စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူကိုယ်တိုင် စာမေးပွဲကြေးလာရောက် ပေးသွင်းရမည်။
သင်ငွေပေးချေရန်သွားသည့်နေရာများသည် ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးတို့တွင်ရှိသော ဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲအချို့ဖြစ်သည်။
သင်ငွေပေးချေမှုကာလအတွင်း ငွေပေးချေမှုကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါကဘောက်ချာ ၀ယ်ယူရန် အခွင့်အရေးမရနိုင်ပါ။
JFT-Basic: 22 USD
စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းမှုအား အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် Prometric မှ သင်၏ Email သို့ voucher နံပါတ်အား ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
စာမေးပွဲ Voucher နံပါတ်ရရှိပြီးလျှင် သက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲ၏ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်၍ ကြိုတင်နေရာယူထားပါ။
* စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် နေရာအား ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့တွင် စီစဉ်နေပါသည်။
* ကျေးဇူးပြု၍ သင်လျှောက်ထားသော မြို့ရှိစာစစ်ဌာနတွင် ကြိုတင်စာရင်း ပေးမှုပြုလုပ်ပေးပါ။
* စာစစ်ဌာနတစ်ခုစီတွင် ထိုင်ခုံအရေအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ သင်ဖြေဆိုလိုသော စာစစ်ဌာနတွင် ခုံနေရာပြည့်သွားပါက ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်း၍ မရနိုင်ကြောင်းကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပေးပါရန်။
* စာမေးပွဲစင်တာသည် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ၀န်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် စံနှုန်းများကိုလိုက်နာမည်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါအကြောင်းအရာများအား သဘောတူလက်ခံလျှင် စာမေးပွဲလျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်းအား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များအားလုံးသည် တူညီမှုရှိပါသည်။
အင်တာနက် ဖွင့်ရန် Browsers
Microsoft Forms ကိုအောက်ပါ browsers အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Google Chrome on Android (latest version)
Windows ကွန်ပျူတာများအတွက် - Internet Explorer 11, Microsoft Edge
Mac ကွန်ပျူတာ အတွက် - Safari
အခြား browers များဖြင့်အသုံးပြုလျှင်ရနိင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ အထက်တွင် ဖော်ပြထား သော browser များကဲ့သို့ Functions များစုံလင်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
Prometric customer ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ
TEL: Non-toll free number: 09977532789
(အင်္ဂလိပ် / ဂျပန်)
*MPT ဖုန်း (မြန်မာစာတိုက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး)၊ ကြိုးဖုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ Telenor၊ Ooredoo နှင့် Mytel လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်ခေါ်ဆို၍မရနိုင်ပါ။
အခကြေးငွေပေးရသောဖုန်းနံပါတ် : 9512390032
*Accessible from all carriers
(ဗမာဘာသာစကား / အင်္ဂလိပ်)
ရုံးဖွင့်ချိန် : တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ 9:00 - 17:00 (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်၊ နှစ်ကုန်နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်များမှအပ) (ဒေသစံတော်ချိန်)
ရုံးဖွင့်ချိန် : တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ထိ 8:30 - 16:30 (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်၊ နှစ်ကုန်နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်များမှအပ) (ဒေသစံတော်ချိန်)
စုံစမ်းရေးပုံစံ (inquiry form) ဖြင့်ဆက်သွယ်လိုပါက ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။ (အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် အကြောင်းပြန်ကြားပေးပါမည်။)
In order to apply for the residence status “Specified Skilled Worker (i)" to work in Japan, you need to pass both the Japanese language test and the skill test.
For the Japanese language test, JFT-Basic and Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N4 or higher are eligible. If you have already passed JLPT N4 or higher, you do not need to take JFT-Basic.
Click here to learn more about the "Specified Skilled Worker visa Japan" system.
Please refer the following pages for each test.
Prometric ID is required for application. If you do not have one, please create Prometric ID from [Obtain your Prometric ID] on the upper left of each test page.
* Only one Prometric ID can be created per person. Please create only one Prometric ID, even if you are going to take multiple exams.
Creating more than one Prometric ID is considered an act of fraud.
* The name of the examinee registered in Prometric ID must be the same as that of the applicant of Voucher, and the name must be the same as that of the identification document. It is also expected that the registered full name for Prometric ID need to be the same as the one on Passport.
* Please note that the email address registered in Prometric ID will be the contact email address for the future.
When the application opens, the application form for each test will be released. Please enter the following information.
Examinee’s Email address (Same as registered email address in Prometric ID)
Examinee’s Prometric ID
Name of examinee (Same as registered name in Prometric ID)
Name of the examination to be taken (select from list)
Agreement on handling personal information (select from list)
* Application can be submitted only once per person. It will be invalid if you apply more than once.
* If you enterawrong Prometric ID on the application form, your application is not accepted. You can not receive any notification email from us. Please make sure the Prometric ID you enter is correct.
* If Email address and Name you entered on the application form do not match the ones registered in Prometric ID, the application will be invalid.
You can confirm your registered information here.
The application will be closed when the number of applicants is reached to the quota in each examination.
Onafirst-come, first-served basis, within three days after the application submitted, you will receive an email nortification with your voucher payment method, payment location and reference number.
* Even if you have completed filling out the application form and submitted it successfully, you may not get the right to purchaseavoucher due to the number of applicants exceeding the limit.
Please bring the test fee to the designated location in cash of Myanmar Kyat within the designated period . The test fee price in Myanmar Kyat fluctuates based on the exchange rate between Myanmar Kyat and US dollar the bank adopts. The test fee will be calculated in Myanmar kyat when you make payment.
When you makeapayment, please be sure to bring (1) your identity verification documents and (2) an email with the reference number of your voucher payment.
Only the person applying for the voucher is eligible to pay the voucher fee.
The places where you go to makeapayment are some branches of the bank located at Yangon and Mandalay.
If you are not able to makeapayment during the payment period, your chance to purchaseavoucher is invalid.
Once we have confirmed the payment for the voucher, Prometric will send you the voucher number to the registered email address.
If you have obtained the voucher, please log in from the page of the applicable exam and makeareservation.
* We are planning to arrangeatest site in Yangon city and Mandalay city.
* Please makeareservation foratest center located in the city you applied for.
* The number of seats at each test center are limited. Please note that if you do not act quickly, you may not be able to makeareservation at the test center you wish.
* The test center will be following the rules and standards set by the Ministry of Health and Sports.
Please proceed to the voucher application only if you agree to all of the contents above.
(The content of Burmese text and English text is the same.)
Microsoft Forms is optimized for the following browsers.
Prometric Customer Service Center
TEL：Non-toll free number: 09977532789
Toll free number: 08008008032
*Accessible from MPT（Myanmar Posts and Telecommunications）fixed-line phone or mobile phone. Telenor, Ooredoo and Mytel mobile phone may not be able to call in.
Non-toll free number: 9512390032
Hours: Monday - Friday 9:00-17:00(Saturday, Sunday and Holidays are closed.) (Local Time)
Hours: Monday - Friday 8:30-16:30(Saturday, Sunday and Holidays are closed.) (Local Time)
Click here to contact via inquiry form. (We will respond to you via email.)